TETIK’ASAN’NY GOVERNORA – Région Haute Matsiatra
Mila omena ny toerana mendrika ny maha renivohim-paritra azy ny renivohitry ny Faritra Mahatsiatra Ambony.
Ny fahadiovana sy ny filaminana dia mitana anjara toerana lehibe eo anatrehan’izany.Misy ny asa efa natomboka (fanadiovana,fifamoivoizana,toeram-piantsoanan’ny fiara vaventy,…) ary manampy izany ny fanorenana fotodrafitr’asa.
Hisy noho izany ny fanorenana TSENA MANARAPENITRA hametrahana ireo mpivarotra an-tsisin-dàlana.
Taorian’ny dingana efa natao dia efa hiditra amin’ny fanatanterahana ny asa fanorenana isika ka ny eo amin’ny ex-Somacodis Antarandolo no toerana hanaovana izany fanorenana Tsena izany.Tanjona ny hanomezana aina vaovao io fananam-panjakana io ho tombotsoa hiarahan’ny besinimaro misitraka.
Amin’ny maha tsena manarapenitra azy dia hanaraka ny fenitra momba ny fahadiovana sy ny filaminana ka hisy noho izany ny asa hiforonana ka anisan’izany ny Agents de Securite, ny Agents de Nettoyage,sns..
Mpivarotra manodidina ny 200 eo ho eo no hisitraka izany fotodrafitr’asa izany ary ho hita ao ny Mpivarotra anana sy legioma,hisy ihany koa Box hivarotan’ireo mpivarotra Fripperie,lamaody sy fitaovana elektronika,…ary hisy parking malalaka.
Tsara ny manamarika fa ampahany amin’ilay tetibola Iray Lavitrisa ariary (un milliard ariary) avy amin’ny Filoham-pirenena no ho enti-manana amin’izao fanorenana fotodrafitr’asa izao.
Fianarantsoa mendrika sy maha-te honina no tanjona!